नेपालमा बन्यो नया रेकर्ड ! ३७ करोड ८० लाखमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी (फोटो सहित) – Khoj Dainik
नेपालमा बन्यो नया रेकर्ड ! ३७ करोड ८० लाखमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी (फोटो सहित)
March 24, 2021 adminLeaveaComment on नेपालमा बन्यो नया रेकर्ड ! ३७ करोड ८० लाखमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी (फोटो सहित)
हरेक दिन हरेक दिन हामिले सत्य समाचार बाहेक अन्य अरु समाचार पनि सुन्ने गरेका छौ तर आज को समाचार अल्लि फरक किसिम को छ । हामिले एक अचम्म को समाचार लिएर आएका छौ सुन्दा पनि हाँसो लाग्ला हामिले यो समाचार एक
फेसबुक पोस्ट मा प्राप्त गरेका हौ । हामिले समाचार सङै फेसबुक मा भेटेको फोटो पनि राखेका छौ फेसबुक मा भेटिएको फोटो हेर्न यो समाचार को तल गएर हेर्नुहोला । हेर्नुहोस बाँकी यो रोचक समाचार
मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकीमा ठूलो अनियमितता भएको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन । ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी झ्वाट्ट हेर्दा ट्वाइलेट, बाथरुम जस्तो देखिने भन्दै
सामाजिक सञ्जालमा ठूलो आ’क्रोश सहित सयौं पोस्टहरु दिनानुदिन आउन थालेका छन । हामीले यो प्रकाश भट्टराई भन्ने फेसबुक प्रयोगकर्ताको पोस्टबाट साभार गरेका हौं । यस निर्माणमा स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायको यथाशीघ्र ध्यान जाओस
हार्दिक श्रदान्जली 🌺😭 भि,रबाट ल,डेर बालिकाको मृ,त्यु
सरकारले फेरि सम्पुर्ण बजार, बिधालय बन्द गर्ने घोषणा गरे सङ्गै आम सर्वसाधारलाई चिन्ता
उर्लाबारी घटना प्रकरण : भैरहवाबाट दुई जना पक्राउ
अध्ययन भन्छ, यी कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन्छन् महिला….
सानो खुसी परिवारमा दैवको आँखा लाग्दा बस र स्कुटर एक आ’पसमा ठोक्किँदा एकै परिवारका ३ जना’को मृ’त्यु